काठबाट बनेको पट्टीहरू
यदि पहिलेको काउंटर केवल धनी मान्छे र बोहेमिया को प्रतिनिधिहरु मा भेटिए भने अब यो उपकरण हाम्रो भान्सा को डिजाइन को धेरै लोकप्रिय र साधारण तत्व भएको छ। तर उच्च तहका कामदारले भान्साको लागि धातु, प्लास्टिक वा काठबाट विशेष बार स्टूल आवश्यक पर्दछ। यस लेखमा हामी काठ को उत्पादन को उपयोग मा विचार गर्नेछौं, जो कि लगभग कुनै फैशनेबल शैली को लागी उपयुक्त छ।
बार स्टूलको प्रकारहरू
ब्याकस्टेरको साथ उच्च स्टूल । यो एकदम सरल कार्यान्वयन छ र सामान्यतया सस्तो छ, तर हामी ध्यान दिन्छौं कि लामो लामो समयसम्म यस्तो फर्नीचरको लागि केही असुविधाजनक छ।
पछाडि कुर्सियां । स्वाभाविक रूपले, यी चीजहरू प्रयोग गर्न थोरै रमाइलो हुन्छन्, र तिनीहरू स्टाइलिश देख्छन्। खानाको बेला तपाईंको पछाडि यति थोरै र राम्रो हुँदैन।
पट्टीको फाईलबाट पट्टीको पछाडी आधा ईन्चेयरको रूपमा , पछाडीको छेउमा लैजान्छ र कपाल घुमाउँछ। यदि तपाईं खानाको तालिकाको लागि पूर्ण प्रतिस्थापनको रूपमा सेवा गर्न रैक चाहानुहुन्छ भने, भान्साको फर्नीचरको यो अत्यन्तै उपयुक्त संस्करण सबैभन्दा इष्टतम हुनेछ।
कसरी काठबाट बार स्टूल छान्नु हुन्छ?
यस मुद्दामा, तपाईंलाई न केवल काठ को ग्रेड, कोटिंग को गुणवत्ता र नक्काशी को सुंदरता को विचार गर्न को लागि, तर पनि उत्पादन को ऊंचाई को आवश्यकता हो। यो यो प्यारामिटर हो जसले अक्सर प्रायः एक बार रक प्रयोग गर्ने सुविधालाई असर गर्छ। धातु स्टूलको विपरीत, समायोजन तंत्रसँग लैजान, काठको पछाडि वा उनीहरूको सरल समकक्षहरूमा बार स्टूलहरू प्राय: यो सुविधाजनक यन्त्र छैन। त्यसोभए, जब कि खरीद गर्दा, तपाईले सबै भन्दा राम्रो तरिकाले निर्धारण गर्न को लागी परीक्षण गर्न आवश्यक छ यस्ता प्रकारको फर्नीचर कसरी प्रयोगमा छ। कुर्सीमा बसोबास गर्नुहोस् र तपाईंको खुट्टालाई बाडवागनमा राख्नुहोला, पछाडि पछाडी झुन्ड्याउने प्रयास गर्नुहोस् र यदि पछाडिको आकृतिसँग आराम हुन्छ भने पत्ता लगाउनुहोस्। यदि तपाइँ कुनै असुविधा महसुस गर्नुहुन्छ भने, तुरुन्तै अन्य मोडेलहरूमा जानुहोस्।
आन्तरिक मा काठ को बने पल्ट पट्टी
काठ को फर्नीचर राम्रो तरिकाले छ, दुवै पुरानो परम्परागत गृहस्थल र आधुनिक वातावरणमा, तपाईंलाई भर्खरै डिजाइन को छनौट गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं कम्युनिज्म र हाई-ट्याक्न भावनामा हुनुहुन्छ भने , त्यसपछि मोडलहरू पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस् जुन काठ सुन्दर रूपमा धातु तत्वहरूसँग जोडिएको छ। बांस वा रतनले औपनिवेशिक शैली, इथेनन शैली वा डचामा धेरै प्रभावशाली देख्छ, तर खरिद गर्दा यी कुर्सियोंको गुणलाई सावधानीपूर्वक जाँच गर्नुहोस्, तपाईंको उच्च फर्नीचरको रूपमा सम्भव र स्थिर हुनुपर्छ।
भान्सामा छतको डिजाइन
कसरी एक छत स्कर्ट बोर्ड कटौती गर्ने?
भान्साको लागि धोका दिने पेंट - व्यावहारिक अन्त्यको लागि उत्तम विकल्प कसरी छनौट गर्ने
बाथरूम मा सजावटी प्लास्टर
फोटो मुद्रणको साथमा अलमारियाँ
पर्देका लागि बन्द
कोठाको लागि विभाजन
कुखुराको लागि कुना मेज
कुना बाथरूम फर्नीचर - शैली र कार्यक्षमता को लागी सरल समाधान
गर्मीको निवासको लागि फर्नेस-चिमनी
कसरी भान्सामा पर्दा सिलाई?
अलमारी संग बंक बिस्तर
दराजको साथ तालिका
पछाडीको इन्सेटसँग स्वेटर
मकई स्ट्रिज - अनुप्रयोग
हेडमा वेन्हेहेडहरू - कारणहरू
छत च्याम्पियनहरू हाई-टेक - आधुनिक डिजाइन विचारहरू
बालकनीमा फ्लोरलाई कसरी इन्सुलेट गर्ने?
सुई कार्यका लागि आयोजक
विदेशमा अध्ययन गर्न 12 अद्भुत स्थानहरू
3 दिनको लागि तरबूज आहार
शिशुहरु को लागि शिल्प
मालदीव - भान्सा
नाम पोलिनाले के गर्छ?
धब्बा कसरी सेतो हटाउनुहुन्छ?
"लेडिबोन" - रजोनिवृत्तिको उपाय
प्रस्तावको लागि बजाउनुहोस्
डाउन जैकेट लुहता
Hipsit - ताकि मेरी आमा थकित छैन!
कसरी ठीक प्रेस थिच्नु हुन्छ?
लेबेन को महल